यस्तो छ पारस शाह चढ्ने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकल,मुल्य सुन्दा सात्तो जाने हेर्नुहोस् कति पर्छ? - Babal Khabar
काठमाडौं साउन गत शुक्रबार राति पारस शाह हेलमेट विनै मोटरसाइलमा निस्किएर प्रहरीसँग गरेकाे लफडाबाजी भाइरल भयो । हेलमेट नलाएको भन्दै एक प्रहरीले काठमाडौंको महाराजगञ्जमा उनलाइ रोकेका थिए । ट्राफिक प्रहरीले रोकपछि उल्टै पारस शाह प्रहरीसँग झगडा गर्न लागेको भिडियो जताततै चर्चाको बिषय बन्यो ।पछिल्लाे केही समयदेखि सोही बाइकका कारण उनी चर्चामा आउने गरेका छन । चर्चामा मात्रै होइन पारस यस्तै बिषयमा पटक पटक बिवादित बनिरहेका हुन्छन् ।खासगरी उनी घरबाहिर निस्कँदा बाइक लिएर हिड्ने तर, कहिले हलमेट नलगाउने,कहिले मदिरा पिउने गर्छन । तर, पासरकाे यस्ता कृयाकलाप बाहिरिँदा पारसकै बढी चर्चा हुन्छ न कि बाइककाे ।
कुन बाइक चढ्छन पारस ? पारस शाह बहु प्रतिष्ठित हार्ले डेविडसन बाइक चढ्ने गरेका छन । उनी सोही बाइकमा कहिले पोखरा,कहिले काठमाडौं लगाएत विभिन्न ठाँउ घुम्ने गरेका छन । पारस हार्ले डेविडसनको पनि पुरानो मोडल हेरीटेज सफटेल क्लासिक चढ्छन ।
कति पर्छ मूल्य ? पारस शाहले चढ्ने हेरिटेज सफटेल क्लासिक बाइकमा १७ सय ४६ सीसीको इन्जिन छ । जुन चार पाँग्रे गाडी भन्दा पनि पावरफुल छ । जसले १०९.० आइवीमा ३००० आरपिएम टर्क पावर जेनेरट गर्छ ।
Prevतौल कसरी बढाउने ? यस्तो छ तरिका
nextमोटाएका प्र,हरीलाई जिल्ला झिकाएर दैनिक यस्तो व्यायाम शुरु